Ny zom-pirenen'ny Antigua sy Barbuda Fandaharana amin'ny vidin'ny | Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda
Olom-pirenena momba ny fandoavam-bola ao Antigua sy Barbuda
Ho fanampin'ny famatsiam-bola ny safidy fampiasam-bola voafantina, dia tsy maintsy andoavana ny saram-pianakaviana fanampiny tsirairay. Ireto misy ireto manaraka ireto:
Sarany amin'ny governemanta
Ny sara ampiharina dia voalaza ao amin'ny latabatra etsy ambany. Ny 10% amin'ny saram-panjakana dia azo andoavam-bola (ary tsy averina) raha toa ny fandefasanao ny fangatahana anao miaraka amina fifandanjana alohan'ny nandraisana taratasy fankatoavana nalefa ho an'ny mpandraharaha nahazo alalana namoaka ny fangatahana. Misy saram-panjakana omena ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviany.
Ny fangatahana rehetra dia iharam-pahavitrihana ilaina mba hiantohana fa ny fangatahana mendrika ihany no mahazo ny zom-pirenena ao Antigua sy Barbuda. Ny saran'ny fahazotoana ilaina dia omena ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana mihoatra ny 11 taona araka ny voatondro ao amin'ny latabatra etsy ambany. Ny saram-pahefana ilaina dia aloa rehefa mandefa ny fangatahana ataon'ny manampahefana voatendry ary tsy averina averina.
Ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana dia takiana handoa ilay vola nomanina mba hamoahana ny pasipaorony.
Ny Tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana (NDF)
Ny saram-asa fanodinana $30,000 $ 30,000 ho an'ny fianakavian'ny olona hatramin'ny 4 olona $ 30,000 ho an'ny fianakaviana manana olona 4 izay manana fandoavam-bola be $ 15,000 isaky ny fiankinan-doha fanampiny.
fandraisana anjara $100,000 $100,000 $125,000
Fahamalinana mety $7,500 7,500 7,500 $ XNUMX $ ho an'ny vady,
2,000 12 $ isaky ny 17-XNUMX
4,000 18 $ isaky ny XNUMX taona no ho miakatra 7,500 7,500 $ XNUMX $ ho an'ny vady,
4,000 18 $ isaky ny XNUMX taona no ho miakatra
* Ny saram-pianarana hafa dia andoavambola. Ireo sarany ireo dia miova ny fiovana.
* Ny vola rehetra voatonona dia ao amin'ny dolara amerikana
Ny safidy momba ny famarotana tena trano
Safidy 2 - Mpamatsy vola tokana $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00
Safidy 3 - C0-fampiasam-bola * $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00
* Ny mpangataka roa na roa nanatanteraka fifanarahana ara-barotra sy fividianana dia azo ampiharina miaraka ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola raha toa ny mpangataka tsirairay dia manome ny vola kely farany amin'ny $ 400,000.
Ny safidy eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola
Mpanam-bola tokana $1,500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00
Fampanjariana vola * $5,000,000.00 $5,000,000.00 $$ 5,000,000.00
* Olona ambany indrindra amin'ny 2 no manao fampiasam-bola miaraka amin'ny orinasa ankatoavina sahabo ho $ 5,000,000.00 farafaharatsiny. Ny olona tsirairay dia takiana amin'ny vola 400,000.00 XNUMX farafahakeliny amin'ny famatsiam-bola miaraka.
Ny saram-asa fanodinana $ 15,000 isaky ny fiankinan-doha fanampiny.
fandraisana anjara $ 150,000 (anisan'izany ny saram-panolorana) $150,000
Fahamalinana mety 7,500 7,500 $ XNUMX $ ho an'ny vady,
Noho ny fahazotoana sy ny saram-pasipaoro
Mpangataka voalohany $7,500 $20,250
Zaza miantehitra amin'ny 0-11 taona $0 $0
Zaza miantehitra amin'ny 12-17 taona $2,000 $5,400
Miantehitra amin'ny 18-25 taona $4,000 $10,800
Ny ray aman-dreny efa niantehitra efa 58 taona no ho miakatra $4,000 $10,800
Sarany pasipaoro - olona tsirairay $300 $810
Fanampy ny Dependents
Zaza miantehitra amin'ny 0-11 taona $10,000 $27,000
Zaza miantehitra amin'ny 12-17 taona $20,000 $54,00
Ray aman-dreny miankina amin'ny zaza efa 58 taona no ho miakatra $75,000 $202,500
* Ampiharina ny fahavitrihana ilaina sy ny saram-pasipaoro
* Mandra-pahatongan'ny 31 Oktobra 2020, $ 10,000.00 dolara amerikana ho an'ny ankizy 5 taona sy latsaka dia 20,000.00 6 dolara amerikana ho an'ny ankizy 17-XNUMX
* Aza hadino: ECD = Dolara Karaibeana Atsinanana ary USD = Dolara Etazonia
Ny sakan'ny fidirana ho an'ny National Development Fund (NDF) dia nihena 50%; avy amin'ny 200,000 100,000 dolara ka hatramin'ny 250,000 dolara amerikana ho an'ny fianakaviana iray hatramin'ny olona efatra, ary avy amin'ny US $ 125,000 ka hatramin'ny $ XNUMX amerikana ho an'ny fianakaviana dimy sy mihoatra.